SERENAD Isihlalo - Umagazini Design
Isihlalo Ngihlonipha lonke uhlobo lwezihlalo. Ngokubona kwami enye yezinto ezibaluleke kakhulu futhi zakudala nezikhethekile ekwakhiweni kwezangaphakathi yisihlalo. Umbono wesihlalo se-Serenad uqhamuka e-swan emanzini lapho ephenduka wabeka ubuso bakhe phakathi kwamaphiko. Mhlawumbe indawo ecwebezelayo nesihlalo esikhulu se-Serenad enomdwebo ohlukile futhi okhethekile yenzelwe kuphela izindawo ezikhethekile neziyingqayizivele.
Igama lephrojekthi : SERENAD, Igama labaklami : Ali Alavi, Igama leklayenti : Ali Alavi Design.
Isihlalo Ali Alavi SERENAD